Tallo Ku socota maayarka hargaysa &golaha deegaanka (,wadada qaaxo)…W/Q Axmednuur Guruje – somalilandtoday.com
Tallo Ku socota maayarka hargaysa &golaha deegaanka (,wadada qaaxo)…W/Q Axmednuur Guruje
Tallo Ku socota maayarka hargaysa &golaha deegaanka (,wadada qaaxo) ,, .
Wadada qaaxo loo yaqaanaa waxay Ku taalaa qiyaas ahaan 15 km meel koonfur kaga beegan xuduudka Somaliland iyo itoobiya , wadadaas oo ah waddo la siaman xuduudka una socota barri iyo galbeed waxay Ka bilaabantaa meel Ku beegan magaalada wajaale ,waxaanay Ku dhamaataa meel Ku beegan buuhodle.
Hadaba wadadan oo ah waddo taariikhiya waxaa la sameeyay 1964 dagaalkii soomaaliya
iyo itoobiya Ka dib markii Nabadgelyo midowga Africa Ka shaqeeyay la dhex dhigay labada dhinac , taasoo qodobada lagu heshiyay ay Ku jirtay in ciidamada la Kala qaado 15 km , wadada qaaxana waxay noqotay halkii ciidamada itoobiya la geeyay ,sidaas ayaanay Ku baxday .
Dagaalkaa 1964 oo leh muhiimad taarikheed wuxuu dhacay iyadoo aanay jirin cudud milateri oo soomaaliya waagaas lahayd ,hasa yeeshee waxa wadanka difaacay shacbigi reer Somaliland oo goobihii wajaale,ina guuxaa iyo daba-goroyaale wacdaro Ka dhigay,dhagayso waraysiga candirisaq xaaji xuseen oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee waagaas .
Mar kale wadada qaaxo waxay noqotay fadhiisimadii ciidamada snm ee waagi halganka , kuwaasoo sideetamaadkii qarnigii hore xarumo Ka dhigtay tuulooyinka Ku teedsan wadada qaaxo sidda ,raamaale ,aadan maanyarre ,dhoobo,-guduud ,gubad daalaco ,waaba -caddo ,kaam liibaan ,qudhac raamaale ,dabayl Wayne dibiile ,iyo qaar kaloo badan .
Hadaba si aanay u lumin xusuusta taariikheed ee wadadani leedahay waxaan golaha deegaanka ee caasimada usoo jeedin lahaa in wadada wayn ee isku xidha bariga iyo galbeedka magaalada hargaysa ee dhex Marta xaafadaha goljano ,sheekh madar ,daami ,new hargaysa la gaadhsiiyo labada cidhif ee magaalada loona bixiyo magacaa taariikhiiga ah ee qaaxo .